DaVinci Resolve စတူဒီယိုတွင် "Sneaky Pete" အရောင်ကိုပြုပြင်သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » DaVinci ခုနှစ်တွင်တညျ့ "Sneaky Pete" အရောင်စတူဒီယိုဖြေရှင်း
DaVinci ခုနှစ်တွင်တညျ့ "Sneaky Pete" အရောင်စတူဒီယိုဖြေရှင်း
Fremont, CA, USA သို့ - သောကြာနေ့, စက်တင်ဘာလ 27, 2019 - Blackmagic ဒီဇိုင်း အမေဇုံချုပ်ဗီဒီယိုများ၏ရာသီ3'' ပြင်းထန်စွာကောင်းချီးစီးရီး "Sneaky Pete" Deluxe ရဲ့အဆင့်3၏အကြီးတန်း colorist ဖြစ်သူ Scott Ostrowsky အားဖြင့်စတူဒီယိုဖြေရှင်း DaVinci အတွက်ရောင်စုံခဲ့ကွောငျးယနေ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။
Ostrowsky, 25 နှစ်ပေါင်း '' အတွေ့အကြုံကထက်ပိုမိုနှင့်အတူဝါရင့် colorist, hit ထိုကဲ့သို့သော "ပျောက်ဆုံးသွားသော", "အဆိုပါနာမည်ပျက်စာရင်း", "သူရဲကောင်းများ" အဖြစ်ပြသထားတယ်နှင့်ရောင်စုံထားပါတယ် "လျှပ်စစ်အိပ်မက်များ။ " သူကမှကူညီခြင်း, ရာသီတဦးတည်းအနေဖြင့် "Sneaky Pete" coloring စတင်ခဲ့သည် Giovanni Ribisi နေဖြင့်ကစား con လူကို Marius Josipovic အကြောင်းကိုဒီထူးခြားတဲ့ပြပွဲ၏ကြည့်ဖွံ့ဖြိုး။
သူအကျဉ်းထောင်ကနေပြန်လွတ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်ဇာတ်လမ်းသည်သူ၏အတိတ်ကာလဘဝနှင့်နေဆဲသူ့ကိုလိုက်ရှာသောဆိုးလူဆိုးဂိုဏ်းကိုရှောင်ရှားရန်ကြိုးစားအားထုတ်မှုရှိသူ၏ဆဲလ်အိမ်ထောင်ဖက်, Pete Murphy ၏ဝိသေသလက္ခဏာချမှတ်, Marius အောက်ပါအတိုင်း။ ဒါဝိဒ်သည် Shore နှင့် Bryan Cranston အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးစီးရီး, Ostrowsky နှင့်ရိုက်ကူးရေးအကြားသတိထားပူးပေါင်းလိုအပ်မယ့်မတူညီစတိုင်နှင့်အတူထူးခြားတဲ့ရာဇဝတ်မှုဒရာမာဖြစ်ပါတယ်။
Ostrowsky ဓါတ်ပုံဖရန့် DeMarco နဲ့ William Rexer ၏ဒါရိုက်တာနှင့်အတူနီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်စီမံကိန်းများ၏ခြုံငုံကြည့်ဖို့သူတို့ရဲ့နှစ်ခုစတိုင်များကပြွီး, ရာသီ2အပေါ် DaVinci ဖြေရှင်းရန်အတွက် coloring စတင်ခဲ့သည်။ "နှစ်ဦးစလုံးသူတို့အတွက်ရိုက်ကူးခဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖို့အရိပ်နဲ့အလင်းနှင့်ကြွယ်ဝသောအံ့သြဖွယ်ခံစားချက်များကိုအသုံးပြုသော" Ostrowsky ကဆိုသည်။ "ကျနော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်၏ခံစားမှုနှင့်ဇာတ်လမ်းအပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအပေါ်အခြေခံပြီးရူပဖန်တီးခဲ့သည်။ "
တည်နေရာများ Waterfront မှမရနိုင်ပါဘူးရေချိုးခန်းကနေကွဲပြားနှင့်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အရောင်ချွတ်အရောင်တင်ရှောင်ကွင်းကြည့်ခဲ့တဲ့ဂိုဒေါင်။ အသေးစိတ်ကိုနှိမ်နင်းခြင်းမရှိဘဲချမ်းသာသောလူမည်းရှာဖွေနေ, Ostrowsky အပေါငျးတို့သဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုထုတ်ယူလာနေချိန်မှာကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းကြည့်ကိုဖန်တီးရန်တိကျသော LUTs ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
ရာသီ3တွင်, ရုပ်ရှင်ပညာတာဝန်များကိုအာသာအဲလ်ဘတ်တို့ကလွှဲပြောင်းယူခဲ့ကြသည်, နှင့်ထုတ်လုပ်မှုကယ်လီဖိုးနီးယားဖို့အရှေ့ကမ်းရိုးတန်းမှပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ဒါကအသစ်တခုစတိုင်တစ်ပူနွေး, တောက်ပကြည့်နှင့်တသားတအကြောင်းကိုဆောင်ခဲ့လေ၏။ Ostrowsky "ဒီနာမည်ပျက်စာရင်း" ပေါ်တွင်အဲလ်ဘတ်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့သူရိုက်ကူးခြင်းနှင့်အလင်းမှကြိုက်တယ်ဘယ်လိုနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခဲ့လေသည်။ "သူကပြပွဲများတွင်ပုံဖော်ရဲ့အလွန်လှပအဓိပ္ပါယ်စတိုင်ရှိပါတယ်, ငါအတုယူချင်ခဲ့တယ်," Ostrowsky ကဆိုသည်။ "ကျနော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်၏အာသာရဲ့ဖြစ်တည်မှုအမြင် ယူ. အရောင်အတွက်ဖော်ကျူးနိုင်ခဲ့တယ်။ "
နှစ်ခုရာသီတစ်လျှောက်လုံး Ostrowsky DaVinci ဖြေရှင်းရန်နှင့်အရောင်ဆုံးမခြင်း၎င်း၏ toolset အပေါ်မှီခို။ "ငါသည် tools တွေကိုအပေါငျးတို့သကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ငါသော့နှင့်ပြတင်းပေါက်သုံးပါနဲ့ကျွန်မအချို့သောဒေသများအာရုံစိုက်ဖို့လိုအပ်တဲ့အခါမှာစည်းချက် tools တွေကို log "Ostrowsky ကဆိုသည်။ "ငါသည် DaVinci အတွက်ဖွင့်ပြသည့်တစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံနှင့်အာသာရဲ့အရသာဟာအချို့သောမြင်ကွင်းတစ်ခုအပေါ်သွားနှင့်သူဘယ်လိုကြောင့် lit ခဲ့ကြသည်ဘယ်လိုပေါ် မူတည်. တစ်ဦးအရောင်အဆင်းခံစားပေးရဖြေရှင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်သောတိုင်း tool ကိုအသုံးပြုပါ။ "
ထိုသုံးဦးရာသီ၏အသီးအသီးတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားကြည့်ခဲ့ပေမယ့် Ostrowsky စိန်ခေါ်ပျော်မွေ့ခဲ့သည်။ "ပထမတော့သူကတစ်ဦးရှိနေခြင်းနှင့် texture ရှိခြင်းနှင့်နွေးထွေးသောပတ်ဝန်းကျင်ကိုအတူထွက်တော့တာပဲ။ ထိုအခါကတစ်ခုနီးပါး hyper အစစ်အမှန်သို့ပြောင်းရွေ့ပေမယ့်အရောင်တစ်ခုကြီးထွားလာတယ်ဆိုတာသိနိုင်ပါတယ်နှင့်အတူသဘာဝကျကျ hyper အစစ်အမှန်စတိုင်။ အခုတော့ရာသီ3အတူအာသာကယ့်ကိုလှပတဲ့, ပါ image ကိုဖန်တီးရန်အရိပ်အလင်းနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကို အသုံးပြု. ခဲ့ပါတယ်။ "
gritty သရုပ်မှန်ကနေပေါ့ပါးပူနွေးကြည့်ဖို့, နယူးယောက်ကနေကယ်လီဖိုးနီးယားရန်, ပြောင်းလဲသွားတယ်ဥတု၏ပထဝီအနေအထား, ဒါကြောင့်အရောင်ဖို့ချဉ်းကပ်မှုပြုသကဲ့သို့, တစ်ဦးစိန်ခေါ်မှု Ostrowsky တစ်ဦးချင်းစီပြသအပေါ်ကြိုဆိုသည်။ "အရောင်တန်းအကြှနျုပျ၏ချဉ်းကပ်အမြဲတမ်းရိုက်ကူးရေးခေါင်းဆောင်ကသူတို့အလုပ်အပေါ်နင်းမပါဘဲဖန်တီးကြည့်ကိုယ်စားပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ငါပုံပြင်နှင့်ကောင်းမွန်သောဆက်သွယ်ရေးကြောင့်အောင်မြင်မှုရရှိရန်မည်သည့်သော့ချက်ကိုပြောပြကူညီသောသူတို့နှင့်အတူရူပဖွံ့ဖြိုးဆဲပျော်မွေ့။ "
DaVinci ၏ကုန်ပစ္စည်းဓါတ်ပုံစတူဒီယိုဖြေရှင်းအဖြစ်ရှိသမျှသည်အခြားသော Blackmagic ဒီဇိုင်း ထုတ်ကုန်မှာရရှိနိုင်ပါ www.blackmagicdesign.com/media/images ။
Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ အမေဇုံဗီဒီယို blackmagic davinci သန်နိဋ်ဌာနျ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်-လူမှုမီဒီယာ ထုတ်လွှင့်-SocialMedia ထုတ်လွှင့်-SocialMeida တည်းဖြတ်ခြင်း ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor post ကိုထုတ်လုပ်မှု SJGolden - လှံ & Arrows ကိုလိုနီခေတ် ကိုလိုနီခေတ် - သတင်း ကိုလိုနီ / ချီကာဂို တီဗီနည်းပညာ ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2019-09-27
ယခင်: Verizon က Smartplay IBC 2019 မှာပွဲဦးထွက် Upgrade
နောက်တစ်ခု: "ဟုအဆိုပါအလင်းအားဖြင့်မျက်စိကွယ်" ဒါရိုက်တာ Gurinder Chadha နိုင်ကျင့်ရုပ်ပုံများပါတီဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်